Aluminium titanium alloy, Al-Ti - Goodao Technology Co, Ltd.
Zvivakwa zve titanium nealuminium:
Titanium alloy isirivha-chena simbi, iyo ine akawanda akanaka maitiro. Pa4.54g / cm3, titanium iri 43% yakareruka kupfuura simbi uye inorema zvishoma pane magnesium, inozivikanwa simbi yechiedza. Simba remishini rinenge rakaenzana nesimbi, rakasimba zvakapetwa kaviri sealuminium uye rakapetwa kashanu pane magnesium. Titanium yakanyanya kupisa tembiricha, nzvimbo inonyunguduka 1942K, yakakwira kupfuura goridhe rinosvika 1000K, rakakwirira kupfuura simbi ingangoita 500K.
Naizvozvo, yakwezva kutarisisa kwakakura uye ikave tarisiro yekutsvaga pa earale alloy.
Iyo yakakosha alloy ine yakanaka yemuviri uye yemagetsi zvivakwa uye ine zviripachena zvakanakira pane zvakajairika titanium alloys uye superalloys. Hunhu hweTi-Al intermetallic makomputa akakwirira kupfuura maTi alloys mune ese mativi, ayo akakosha zvakanyanya kune zvigadzirwa zvemuchadenga. Nekuda kwemhedzisiro yechisungo che covalent, zvakapatsanurwa zvine chekuita nezvekupisa-tembiricha, senge zvinokambaira, simba rakasimba uye kuomarara kwekutsemuka, zvinogona kuvandudzwa. Panguva imwecheteyo, ine yakanakisa yepamusoro-tembiricha oxidation kuramba uye ngura kuramba, saka ipamusoro tembiricha yemahara zvinhu zvine kugona kukuru.
Kushandisa titanium nealuminium:
Titanium alloy inoshandiswawo zvakanyanya muindasitiri inovhara indasitiri. Inogona kugadzirwa kuita chimwe chikamu chechiyero chipfuro zvinhu senge mbishi zvinhu zvemagnetron inoputira kupfeka. Mukuita kwekugadzira vhoriyamu yekuvharira zvinhu, titanium aluminium alloy ine dzakasiyana siyana zvezvikamu, zvinowanzo shandiswa titanium aluminium atom ratio (pa%): 90:10, 80: 20,70: 30, 50:50, 30:70 , 20:80, 10:90. Titanium yealuminium alloy inogona kugadzirwa nekutsvaira vacuum kana zvirimo zve titanium atom yakakura kudarika kana yakaenzana ne50%. Kana zvirimo zve titanium zvadzikira uye zvirimo zvealuminium zvikawedzera, zvinogona kungogadzirwa nehupfu simbi yekusangana nezvinodiwa zvezvinhu zvinangwa. Kana maatomu e titanium akakurisa kana kuenzana ne80%, iyo titanium alloy inogona zvakare kugadzirwa nekuumbururwa.
Pashure: 211Nobiobium Aluminium Carbide, Nb2AlC
Zvadaro: Tungsten-chromium chiwanikwa, W-Cr
Titanium Aluminium chiwanikwa
Titanium Aluminium Alloy Mafekitori
Titanium Aluminium Chiwanikwa Fekitori
Titanium Aluminium Alloy Mugadziri
Titanium Aluminium Alloy Vagadziri
Titanium Aluminium Alloy Mutengo
Titanium Aluminium Alloy Zvinyorwa